+5 yamadolobha amahle kakhulu eHuelva | Izindaba Zokuhamba
Amadolobha amahle kakhulu eHuelva
Luis Martinez | | Iziqondiso, Huelva
I-Los amadolobha amahle kakhulu eHuelva bakunikeza izindlu ezimhlophe ezikhethekile, izikhumbuzo, amabhishi amahle nezimangaliso zemvelo ezifana neDoñana National Park (lapha sikushiya i-athikili emayelana nale ndawo). Kepha futhi nokunikezwa kwendawo yokuhlala ozozithola usekhaya kuyo.
Futhi, kunenye ingxenye yesifundazwe engaziwa kakhulu ngezokuvakasha efaka amadolobha amancane asezansi kwezintaba ze- izintaba zeCumbres Mayores noma i-Aracena. Sizokhuluma futhi ngabo, kepha, ngaphezu kwakho konke, sizokukhombisa ukuvakasha kwamadolobhana amahle kakhulu eHuelva azokuvumela ukuthi wazi ngokujulile izimangaliso zale ndawo yaseSpain.
1 Kusuka e-Ayamonte kuye eCortegana
1.3 Ukuya entabeni
1.4 INiebla, elinye lamadolobha amahle kakhulu eHuelva
1.6 ICortegana, ukuqedela ukuvakasha kwethu eHuelva
Kusuka e-Ayamonte kuye eCortegana
Sizoqala ukuvakasha kwethu emadolobhaneni amahle kakhulu aseHuelva ezindaweni ezisogwini ezifana ne-Ayamonte bese sidlulela maphakathi nesifundazwe. Ngale ndlela, sizokukhombisa uhla oluphelele lwamathuba okungenziwa yileli lizwe elihle.
Umkhandlu Wedolobha lase-Ayamonte
Kutholakala emlonyeni we Umfula iGuadiana, ezinyaweni ze Amaxhaphozi e-Isla Cristina futhi emngceleni nePortugal, leli dolobha laseHuelva liyadingeka. Endaweni yakubo kamasipala uzothola okuthandwa kakhulu Ibhishi lase-Isla Canela eceleni kwePunta del Moral.
Kepha, eduze kwezindawo ezinenani eliphakeme lemvelo, i-Ayamonte inegugu elibabazekayo elibanzi. Mayelana nezenkolo, sikukwazisa ukuthi uvakashele amasonto aseNuestra Señora de las Angustias naseSan Francisco, Kokubili kusukela ngekhulu le-XNUMX futhi okugqame ophahleni lwayo lweMudejar.
Kufanele futhi ubone ithempeli lase-El Salvador, ngaphakathi lapho kukhona i-altare eliyi-Churrigueresque namatafula amaningana womdwebo waseFlemish. Ifa lezenkolo lase-Ayamonte ligcwaliswa yisonto laseLas Mercedes, iMercedario kanye neHermanas de la Cruz convents, amasonto eSan Antonio, del Socorro naseNuestra Señora del Carmen kanye nesikhumbuzo esiyigugu esiseVirgen de las Angustias.
Ngokuphathelene nokwakhiwa komphakathi, unesakhiwo esihle seCity Hall noma Indlu kaMarchena, ekhiqiza kabusha isitayela sezindlu zamaNdiya; umasingcwabisane waseRoma wePunta del Moral; isigodlo saseMarquis sase-Ayamonte noma seCasa Grande, esukela ngekhulu leshumi nesikhombisa leminyaka.
Ekugcineni, sikweluleka ukuthi ubone ifayela le- IBaluarte de las Angustias, okuhlala khona kuphela udonga lwodonga; umbhoshongo onesizungu i-Isla Canela kanye neGuadiana International Bridge elihlaba umxhwele, elihlukanisa i-Ayamonte neCastro Marim, ePortugal.
Isikwele ePalos de la Frontera
Manje sikulethela leli dolobha elincane hhayi nje ngoba liphakathi kwamadolobha amahle kakhulu eHuelva, kodwa futhi nangenxa yokubaluleka kwalo okukhulu ngokomlando. Njengoba wazi kahle, yasuka ethekwini layo UChristopher Columbus ohambweni olwamholela ekutholeni iMelika.
Konke lokhu kwenze iPalos yavela ohambweni lwezobuciko lomlando we Izindawo zaseColombia. Edolobheni laseHuelva ungavakashela i- Isigodlo saseLa Rabida. Ngokunjalo, ethekwini lasePalos kukhona iMuelle de las Carabelas, enezakhi zemvelo zalabo uColumbus azithatha kulo mdlalo wakhe.
Ngeke wazi ukuthi abafowethu abadumile basePinzón, ababehamba naye, babengabomdabu baleli dolobha. Ngalesi sizathu, endlini yabadala babo, ngesitayela se-Renaissance, ubuye ube nemnyuziyamu. KwakunguMartín futhi kunesithombe esisedolobheni.
Kepha ongakuvakashela ePalos akugcini lapha. Kuyathakazelisa kakhulu Isonto iSt GeorgeKubuye kwisitayela se-Gothic Mudejar nezindlu ze-Renaissance frescoes kanye ne-XNUMXth century eqoshwe emele iSanta Ana. Ngaphezu kwalokho, une-Fontanilla, umthombo omncane owanikeza amakarahara amanzi, kanye nezinsalela zemivubukulo zenqaba yasePalos.
Ekugcineni, ezindaweni ezizungezile zezindela zaseLa Rábida unayo Isikhumbuzo sabatholile, efinyelelwa ngomgwaqo ohlotshiswe ngezihlangu zawo wonke amazwe ase-Ibero-American kanye nepaki yezitshalo iJosé Celestino Mutis. Futhi ngokufanayo, omunye umdlalo owashiya iPalos ukhunjulwa eMuelle de la Calzadilla: indiza ye-Plus Ultra, indiza yasolwandle eyafika ngo-1926 eBuenos Aires.
I-Almonte, elinye lamadolobha amahle kakhulu eHuelva
Siya maphakathi nesifundazwe saseHuelva ukuma kuleli dolobha elihle elinazo zonke izinto ezikhangayo. Okokuqala, endaweni kamasipala wayo kukhona Ibhishi leMatalascañas nengxenye enhle yeDoñana National Park. Kepha ngaphezu kwakho konke, ngoba kufaka nedolobhana elidumile lase-El Rocío, lapho kutholakala khona i-hermitage enhle, lapho izinkulungwane zabahambi zenza khona uhambo lokuvakasha minyaka yonke. Lapha siyakushiya i-athikili emayelana nalo muzi omncane.
Ngokufanayo, unezinye izikhumbuzo zentshisekelo e-Almonte. Phakathi kwabo, i- Isonto le-Our Lady of the Assumption, nesonto layo laseMudejar, iSanto Cristo hermitage kanye nesakhiwo seHholo Ledolobha, elakhiwa ngekhulu le-XNUMX. Lesi sakamuva sizungezwe imigwaqo emincane enezindlu zabo zendabuko zabamhlophe.
INiebla, elinye lamadolobha amahle kakhulu eHuelva
Izindonga nenqaba yaseNiebla
Manje sifika kwelinye lamadolobha amahle kakhulu eHuelva, kodwa futhi nelinye laziwa kancane, yize liyigugu langempela. UNiebla unomlando weminyaka eyizinkulungwane. Eqinisweni, bekuyinhloko-dolobha yenye ye- amakhorasi lapho i- I-Caliphate yaseCórdoba futhi, kamuva, kwaba izwe elizimele.
Ngokubanzi, endaweni kamasipala wayo kukhona dolmens of La Hueca futhi de Soto, okusibuyisela emuva ku-Iron Age. Ungabona futhi kuleli dolobha ibhuloho elihle eligcinwe ngokuphelele laseRoma nezinsalela zesonto lombhishobhi lamaKristu okuqala kusukela esikhathini samaVisigoth.
Kepha okuheha kakhulu iNiebla yiqembu elihlaba umxhwele elakhiwa ngalo izindonga zayo nenqaba yayo kusukela esikhathini se-Almoravid. Futhi eceleni kwaso, isonto laseNuestra Señora de la Granada, okuyisonto lamaSulumane elidala ngesitayela seMudejar Gothic; isigodlo samaGuzmanes kanye neSibhedlela se-Our Lady of the Angels, indlu yamanje yamasiko.
Kakade sisenkabeni yezintaba ezingaziwa, sithola idolobha elihle lase-Aracena, elibonakala ngezindlu zalo ezibiyelwe ngezimhlophe, indawo yemvelo enelungelo nezikhumbuzo eziningi. Ngokuqondene ne-landscape, igcwele ISierra de Aracena nePicos de Aroche ipaki yemvelo, lapho, ngaphezu kwalokho, ungabona izindawo zokuvubukula zaseCueva de la Mora, Cerro del Tambor nase del Castañuelo.
Kepha isimangaliso esikhulu se-Aracena singaphansi kwendawo yaso yasemadolobheni. Sikhuluma nge IGrotto yezimanga, okungena kwakhe ku-Pozo de la Nieve street. Kuyinkimbinkimbi engaphansi komhlaba edalwe ukuguguleka kwamanzi emadwaleni e-limestone eCerro del Castillo. Inobude obungamamitha angaphezu kwezinkulungwane ezimbili, noma ungavakashela kuphela cishe amakhulu ayishumi nanhlanu. Kepha, noma kunjalo, uzothola umbukiso oyingqayizivele wama-stalactites, ama-stalagmites, ama-aragonites noma ama-coraloids ahlanganiswe namachibi.
Ngemuva kokujabulela lesi simangaliso semvelo, futhi sikukwazisa ukuthi uvakashele izikhumbuzo eziyinhloko ze-Aracena. Sesivele sishilo okubaluleke kakhulu kuwe ngokudlula. Sibhekisa ku inqaba, inqaba yama-Arab yangekhulu le-XNUMX elondolozwe kahle kakhulu.
Eduze kwalokhu kukhona i- ISonto Lethu Lady of Greater Pain, Isitayela seMudejar, yize ezinye zezinto zayo, njenge-portal kanye nekhwaya, sezivele zingezaseGothic esedlule. Izici ezifanayo zokwakha ziveza amakhonsathi aseSanta Catalina Mártir namasonto aseSan Pedro noma eSan Roque. Kepha okuhle kakhulu yi- Isonto laseSanta María de la Asunción, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX ngokwemigomo yesitayela se-Renaissance.
Ifa lika-Aracena aligcini lapha. Ngokuqondene nokwakhiwa kwezakhiwo zomphakathi, sincoma ukuthi ubone isakhiwo seCity Hall, izindlu zase-Aracenilla, ipulazi laseSan Miguel futhi, ngaphezu kwakho konke, okumangalisayo Amakhasino Arias Montano, isakhiwo esithandekayo sesitayela sesimanje.
ICortegana, ukuqedela ukuvakasha kwethu eHuelva
Eduze kakhulu ne-Aracena kunelinye idolobha elifakwe ngokufanele phakathi kwamadolobha amahle kakhulu eHuelva. Le yiCortegana futhi ihlanganisa ifa elihle ngokumangalisayo nezindawo ezibabazekayo.
Ngokuphathelene neyokuqala, uphawu lwayo olukhulu yi- inqaba. Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi inenqaba, i-barbican kanye ne-hermitage, leyo yeNuestra Señora de la Piedad. Njengamanje, ezinye izinsuku zasendulo inohlonze impela.
Isakhiwo senkolo esibaluleke kunazo zonke eCortegana yi Isonto loMsindisi oNgcwele, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX ngesitayela seMudejar Gothic, yize izandiso zamuva zayinika izici ze-Renaissance. Ngaphezu kwalokho, ngaphakathi, ungabona okumangalisayo iqoqo lesiliva laseMexico kusukela ngekhulu le-XNUMX, ipulpiti elivela enkathini efanayo kanye ne-lattice yensimbi ekhangayo, kanye nesithombe esinothile senkolo.
Sikweluleka nokuthi ubone i- isonto lesan sebastian, futhi Gothic Mudejar; i-hermitage yeCalvario nezakhiwo ze Grand Casino Umphakathi nendawo yaseshashalazini yeCapitol-Sierra.
Ekuphetheni, sihambise ezinye zezindawo ze- amadolobha amahle kakhulu eHuelva. Kodwa-ke, esifundazweni esinjengoHuelva kunamanye amadolobha amaningi amahle. Lokhu kunjalo, isibonelo, Jabugo, Ukuzalwa kwe-ham kwegama elifanayo; kusuka I-Almonaster la Real, ne-mosque yayo yekhulu le-XNUMX kanye nebhuloho layo elimangalisayo iTres Fuentes bridge, noma i-de Sanlucar de Guadiana, nenqaba yayo enhle yaseSan Marcos. Azikho yini izizathu ezanele zokuvakashela eHuelva?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Amadolobha amahle kakhulu eHuelva
Yini ongayibona eNepal